Ihe niile banyere pusi Bengali | Nwamba Noti
The Bengali cat, a furry na anụ ọhịa na nnukwu obi
Monica sanchez | | Dịrị
Nwamba Bengal ma ọ bụ pusi Bengali bụ furry dị ịtụnanya. Ọdịdị ya na-echetara anyị agụ owuru; Agbanyeghị, ekwesighi iji ọdịdị ahụ ya ghọgbuo anyị, ebe ọ nwere ụdị nke nwamba mara mma ma mara mma.
Ọ bụ ụdị ìgwè dịtụ ọhụrụ, mana ọ na-ewuzi ewu ewu. O bukwanu ya, onye achoghi inwe agụ owuru n’ulo? Yak ikpep ekese iban̄a enye.
1 Bengali akụkọ ihe mere eme
2 Ụdị ahụ
2.1 White bengal nwamba
3 Afọ ole ka nwamba Bengal ma ọ bụ Bengali ga-adị ndụ?
4 Kedu ka agwa ahụ dị?
5 Etu ị ga-esi lekọta pusi Bengal ma ọ bụ Bengali?
5.2 Mmega ahụ
6 Ego ole bụ pusi bengal?
Bengali akụkọ ihe mere eme
Nke a mara mma pusi pụta dị ka obe n'etiti nwamba ụlọ na anụ ọhịa, ebe ọ malitere dị ka ngwakọ nke cat agụ owuru Asia (Prionailurus bengalensis) na ụdị anụ ụlọ ndị ọzọ: Okechukwu, Abisi, British Shorthair na onye Ijipt Mau. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume ịnweta anụ ọhịa, ma nwee agwa na ịhụnanya.
Ka ọ na-erule afọ 40, enweburu nwamba Bengal na Japan, mana ụdị ahụ amaliteghị ruo mgbe 20-30 gachara, na United States, ebe e gosipụtara ha izizi na 1985. Ha dọtara uche dị ukwuu nke na n'oge na-adịghị anya a matara ha dị ka ndị International Cat Association (ICA).
N'agbanyeghị nke a, enwere ndị mkpakọrịta, dịka CFA, nke na-anabataghị ya dị ka ụdị n'ihi na ọ naghị anabata ngwakọ. Naanị ọgbọ nke Bengalis nwere ike isonye na mmemme ha na ebumnuche nke ime ka mkpụrụ ndụ ihe nketa dịkwuo nkọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na enwere ndị na-azụ ahịhịa na-aga n'ihu na-ahọpụta ihe ntule ma gafee ha iji meziwanye ụdị; na n'eziokwu taa ọ dịkwaghị mkpa ịgafe nwamba agụ owuru na nwamba ụlọ.
A cat bengal na n'ihe ndina ya
Nwa Bengali O bu nnukwu anumanu, riri ihe ruru 9kg n'ihe banyere nwoke, ma ruru nwanyi dika 4kg. Ahụ mmadụ siri ike ma nwekwa ahụ ike, nke ntutu dị mkpụmkpụ, nke dị nro, dịkwa oke, na-echebe. Isi ahụ sara mbara, gbaa gburugburu, anya na-acha akwụkwọ ndụ, obere ntị na ọdụ, ọdụ dị ọkara.
Dabere na ọkọlọtọ, ọ bụ iwu na ị ga-enwe ọdụ ọdụ ojii, afọ na-akpụ akpụ na ụkwụ ụkwụUwe mkpuchi ahụ bụ naanị brindle, isi agba nwere ike ịbụ ude, ọla edo, oroma, ọdụdụ, odo ma ọ bụ ọcha.
White bengal nwamba
Foto - Amolife.com
Remember na-echeta agụ agụ albino ọtụtụ, nri? Characteristicdị njirimara ahụ mara mma, omume ahụ nke afọ ojuju nke ọ nakweere ka ọ na-agba ... ...dị bengal ọcha bụ anụmanụ mara mma nke ị ga - aghọ ezigbo enyi nke ezinụlọ niile ngwa ngwa. N'ezie, ị kwesịrị ịmara na ịbụ onye ọcha ị ga-ezere igosi eze anyanwụ ogologo oge, ebe ọ bụ na ogologo oge ị nwere ike ibute ọrịa kansa.
Afọ ole ka nwamba Bengal ma ọ bụ Bengali ga-adị ndụ?
Ogologo oge ị nwetara nlekọta kwesịrị ekwesị, nwere ike ibi ndụ zuru oke 9 na 15 afọ. N'ezie, ọ ga-ebirịrị n'ime ụlọ, ebe ọ bụ na anyị ekwe ka ọ pụọ, o yikarịrị ka ọ ga-ebelata ndụ ya.
Kedu ka agwa ahụ dị?
Nwa Bengali bụ pusi pụrụ iche. O nwere ọgụgụ isi, na-ahụ n'anya ma na-arụsi ọrụ ike. Ọ na-enwe mmasị igwu egwu, ịchọpụta, ịmụ ihe ọhụrụ, na ịnọnyere ezinụlọ ya.. Na mgbakwunye, ọ bụ otu n'ime ụmụ anụmanụ na-eme ka mmekọrịta siri ike na otu onye, ​​n'agbanyeghị na ọ hụrụ mmadụ niile nọ n'ụlọ ahụ n'anya.
Ọ na-atọ ụtọ ịwụ elu, ịrị elu na, ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe iju anya, igwu mmiri, ihe ọ maara etu esi eme ọfụma ebe ọ bụ ogo ọ ketara n'aka nkịta agụ Asia, nke ga-achụ nta anụ ọ na-eri na swamps.
Etu ị ga-esi lekọta pusi Bengal ma ọ bụ Bengali?
Ọ bụrụ n’ikpebie ibi na nwamba Bengal ịkwesịrị inye nlekọta ndị a:
Mgbe ọ bụla enwere ike, ọ na-ukwuu tụrụ aro inye eke nri, ma Yum Diet maka nwamba, ma ọ bụ Barf (site n'enyemaka nke onye na-edozi ahụ). Ọ bụ nri ị ga-anagide nke ọma na nke ga-ewetara gị ọtụtụ elele, ndị isi bụ ndị a:
Na-egbu maramara ntutu
Ezigbo ike, ahụike ma dị ọcha
Oke na mmepe
Ezi ahụ ike
N'ihe banyere enweghị ike ịhọrọ ụdị nri a, ihe ozo di nma bu inye nri nke n’enweghi nkpuru ma obu ihe ndi ozo, dị ka Applaws, Orijen, Ire nke anụ ọhịa, n'etiti ndị ọzọ ebe ndị a agaghị ewetara gị nsogbu ọ bụla. N'ezie, ị kwesịrị ịmara na akpa 7kg dị oke ọnụ: ọ nwere ike ịdị ọnụ ahịa 40 euro n'ụzọ dị mfe, mana ego a ga-enye dị obere karịa ma ọ bụrụ na e nyere ya nri dị ọnụ ala karịa n'ihi na ọ nwere protein anụmanụ ka ukwuu.
Nwa Bengali bụ pusi na-arụ ọrụ nke ọma. Ekwesiri igwu ya kwa ubochi, otutu oge. Oge atọ ma ọ bụ anọ ga - anọ nkeji iri na ise ga - eme ka ị daa, ị ga - adị jụụ ma nwekwa ọ happụ.
Ọ pụkwara ịbụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu ịkụziri ya iso ya jee ije njikota. Ọ bụrụ na ị maghị etu esi eme ya, echegbula. Gbanye Akụkọ a Anyị na-akọwara gị ya.
Ntutu isi a ga-asacha ya otu ugbo ubochi na kaadi ma obu mbo iji wepu ajị anụ nwụrụ anwụ. Ọ dịghị mkpa ịsa ya. N'oge agbaze oge ọ ga-abụ ihe amamihe na-enye Malta igbochi oke ntutu isi na-agbakọta na afọ gị.
Enwere ike ime ka anya dị ọcha kwa ụbọchị 3-4 site na iji gauze dị ọcha (otu maka anya ọ bụla) kpuchie ya na chamomile infusion.
Ekwesịrị ịmịchaa ntị otu ugboro n'izu site na gauze dị ọcha na anya mmiri ọgwụ. Ga-agbakwunye 1-2 tụlee ma jiri gauze hichaa akụkụ kachasị nke ntị ọ bụla.
Dị ka pusi ọ bụla, n'ime afọ mbụ nke ndụ ọ ga-adị mkpa ịkpọga ya na vet nke mere na ị na-etinye ịgba ọgwụ mgbochi dị mkpa na maka na-anọpụ iche ma ọ bụ na-atụgharị ya ma ọ bụrụ na i bu n'obi izu ya.
Dị ka nke afọ na kwa afọ, ọ bụ ihe amamihe dị ukwuu iji weghachite ya iji gbaa mgbatị ma chọpụta ya iji chọpụta nsogbu ọ bụla.
Na mgbakwunye, oge ọ bụla ị chere na ị na-arịa ọrịa, ị ga-agakwuru onye ọkachamara ka ọ gwọọ gị.
Ego ole bụ pusi bengal?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ n’ezie ibi na nwamba Bengali, i chee na ị dị nkwadobe inye nlekọta niile ọ ga-achọ n’oge ndụ ya niile, ị ga-eche na nwa nkịta na-akwụ ụgwọ gburugburu 1500 euro zụta site na nsị.
Anyị maara na ị hụrụ ya n'anya, yabụ ka anyị kwụsị isiokwu a site na itinye foto foto nke Bengali ma ọ bụ Bengal cat:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nwamba Noti » Dịrị » The Bengali cat, a furry na anụ ọhịa na nnukwu obi
Ugboro ole kwa nkeji na-adịkarị maka nwamba?
Kedu ihe kpatara nwamba enweghị ike iri chocolate?